Ababhali abaninzi abaphumeleleyo beBhaso likaNobel basiwa kwiFilimu | Uncwadi lwangoku
Ngomvuzo weNobel woNcwadi osandula kunikwa umbhali waseBritane IKazuo Ishiguro, sijonga kwakhona abanye ababhali abaphumeleleyo imisebenzi yabo yenziwe ukuba ibe yimovie NjengoIshiguro.
Ukungahoyi inyani yokuba i-cinema izondla ngoncwadi, kubonakala ngathi xa ihlengahlengisa loo misebenzi ngabo baphumelele elona bhaso libalaseleyo loncwadi emhlabeni, isazuza ubukhulu. Kodwa ngaba bahlala beyimpumelelo okanye bahlala kwimveliso echanekileyo okanye kwimirhumo nje? Masibone eminye imizekelo eneefani zika IHemingway, Munro, Faulkner, Steinbeck, Cela, Grass, Kipling okanye García Márquez.
1 UAlice munro
2 UCamilo José Cela
3 UGünter Ingca
4 UGabriel García Márquez
6 UJohn steinbeck
7 URudyard Kipling
9 UWilliam Faulkner
Umbhali waseCanada uphumelele iNobel kwi 2013. Kuthathelwa ingqalelo njenge «the Chekhov waseKhanada«, Ngaba yingcali yamabali amafutshane kunye namabali apho abonisa ubomi bemihla ngemihla. Ezinye zezihloko zakhe zezi uthando lomfazi onesisa (1998) u Inzondo, ubuhlobo, ukuthandana, uthando. Uninzi lwazo luye lwahlengahlengiswa kwimiboniso bhanyabhanya ngakumbi kumabonwakude. Kwaye mhlawumbi olona tshintsho lwaziwayo ngumlingisi kunye nomlawuli uSara Polley, owafota ngo-2006 Kude kuyea, eneenkwenkwezi uJulie Christie.
UCamilo José Cela
UCela uphumelele iNobel 1989 Kwaye ibininzi imisebenzi yakhe asiwe kwimovie, enje Usapho lukaPascual Duarte Ekhokelwa nguRicardo Franco, noJose Luis Gómez kunye noHector Alterio. OKANYE Inyosi, NguMario Camus, kunye ne-choral cast yeyona nto ibalaseleyo kwi-cinema yaseSpain. Kwaye kwakhona Umsebenzi ongaqhelekanga nozukileyo wecandelo lika-Archidona, NguRamón Fernández xa sinolwazi.
Umbhali ophikisanayo waseJamani waphumelela iBhaso likaNobel 1999 kunye nomsebenzi wakhe owaziwayo, Igubu le-tin, yenziwa ifilimu kwimveliso eyayisenziwa ngokubambisana eNtshona Jamani neFrance kwi 1978. Kunyaka olandelayo waphumelela iPalme d'Or ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kunye neOscar yeyona bhanyabhanya ibalaseleyo yelinye ilizwe.
YeNobel yaseColombia kwi 1982 Uninzi lwemisebenzi yakhe luye lwahlengahlengiswa, kodwa kwimpumelelo encinci kubagxeki kunye noluntu ngokubanzi. Mhlawumbi izihloko ezinje I-colonel ayinabani wokumbhalela, kuhlobo lwayo lwango-1999 olwaludlala uSalma Hayek noMarisa Paredes phakathi kwabanye. Ingxelo yokufa eyaxelwa kwangaphambili yatshintshwa ngo-1987, kunye no-Anthony Delon, u-Ornella Mutti okanye uRupert Everett. Babenemifanekiso yabo Uthando kunye nezinye iidemon o Uthando ngexesha lekholera, noJavier Bardem.
IHemingway iphumelele iNobel kwi 1954 kwaye zininzi iinoveli zakhe (ngaphezulu kwe-15) ezaye zaba ziimpumelelo kakhulu kwaye zayimpumelelo. Ziphakathi kwazo:
Indoda endala nolwandle, ukusuka ngo-1958, kunye noSpencer Tracy.
Sala kakuhle kwimipu kwiinguqulelo ezimbini noGary Cooper noHelen Hayes ngo-1932 kunye no-Rock Hudson noJennifer Jones ngo-1957.
Ikhephu laseKilimanjaro, Ngo-1952, kunye noGregory Peck noAva Gardner.
Ngubani ohlawulwa yintsimbi, Ngo-1943, kunye no-Ingrid Bergman noGary Cooper.
Umvuzo weNobel kwi 1962UJohn Steinbeck ubalise ngathi akukho mntu wumbi idrama yomsebenzi waseMelika ngexesha loxinzelelo olukhulu. Imisebenzi yakhe eyaziwa kakhulu ehambelana ne-cinema yile Yeempuku namadoda, kunye nohlobo lokuqala luka-1939 kunye neyesibini ngo-1992. Kwaye kunjalo kukwakho okungenakulibaleka Iidiliya Zomsindo y Ngasempuma kwe-Eden.
U-Kipling wayenguye isiNgesi sokuqala ekufumaneni iNobel yoncwadi kwi 1907. Iklasikhi yakhe eyaziwa kakhulu, Incwadi yehlathi, Wayenolungelelwaniso lokuqala olwenziwe ngumlawuli Zoltan korda en 1942, Iziphumo zabo ezikhethekileyo kunye nesandi somculo esonyulelwe ii-Oscars. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo eyona sonke siyikhumbulayo ngu Inguqulelo yeWalt Disney yekhathuni Wenze ntoni kwi 1967. Kunyaka ophelileyo ingxelo yokugqibela ekhokelwe nguJon Favreau yakhutshwa.
UShaw uphumelele ibhaso kwi 1925 wenza umdlalo wakhe owaziwayo, Pygmalion. Iskripthi samzuzela u-Oscar kwicandelo lakhe. Baneenkwenkwezi kuyo ULeslie Howard kunye noWendy Miller. Kodwa eyona idumileyo yayiyinguqulelo yomculo elandelayo 1964, ophumelele imifanekiso eqingqiweyo esi-8, Inenekazi elithambile. Akunakwenzeka ukulibala Rex Harrison kunye no-Audrey Hepburn njengoNjingalwazi Higgins no-Elisa, umthengisi weentyatyambo oselula oza kuzama ukuba yinenekazi lentlalontle ephezulu.
UFaulkner uphumelele ibhaso likaNobel loNcwadi kwi 1949, Kwiminyaka eliqela emva kokwenza umtsi wokuya eHollywood njengombhali wesikrini. Uninzi lwezi skripthi ludluliselwe kwiscreen ngumhlobo wakhe kunye nomlawuli omkhulu UWoward Hawks. Enye yezona zinto zidumileyo awazisayinayo yile El iphupha elingunaphakade, Umsebenzi wobugcisa wefilimu noir obalaseleyo Humphrey Bogart kunye noLauren Bacall e 1946.
UFaulkner ukwahlengahlengise eminye yemisebenzi yakhe kwifilimu, enje Siphila namhlanje (Ngo-1933), umdlalo weqonga UJoan Crawford y UGary Cooper ekwalathiswa ziiHawks Ngo-1969 UMark Rydell uhlengahlengise enye yeenoveli zakhe, Iipokethi, apho umbhali wayefumene ibhaso lePullitzer.
Ngaba siyibonile eminye yale misebenzi kulungelelwaniso lwakho lwefilimu? Ngaba sibathandile? Ngokuqinisekileyo ewe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Ababhali abaninzi abaphumeleleyo beBhaso likaNobel basiwa kwiFilimu
Ababhali abathathu baseRussia abasendleleni eya kwiRevolution